प्रकाशमानसंग नविनाको रहस्यमय भेट, नेकपामा खैलाबैला ? — Motivatenews.Com
प्रकाशमानसंग नविनाको रहस्यमय भेट, नेकपामा खैलाबैला ?
काठमाडौं – अनेरास्ववियूकी पुर्व अध्यक्ष नविना लामाले एका एक काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसंगको भेटघाटले राजनीतिक बजारमा तरंग ल्याएको छ । ससद भवन नजिकै लामाले साथिहरुसंग मिलेर ब्यबसाय सुरु गरेपछि प्रकाशमान सिंह लामाको ब्यबसाय अवलोकन गर्न पुगेका थिए ।
नविनले सुरु गरेको कफी सपमा सोमबार कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह पुगेर व्यवसायको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । केहि दिन अघि मात्रै नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीको जनसंगठनको नेतृत्व टुङ्गो लगाएको थियो । सत्तारुढ दलको विधार्थी संगठन अनेरास्ववियुको बहालवाला अध्यक्ष भएपनि नविनालाई कुनै जिम्मेवारी दिइएन बरु महासचिव ऐन महरलाई विधार्थी संगठनको संयोजक तोकेको छ नेकपाले । पार्टीको निर्णयको नविनाले विरोध त गरेकी छैनन् तर पनि पार्टीले उक्त निर्णय लिँदा आफुसँग कुनै सल्लाह नगरिएको गुनासको भने उनले गरेकी छिन् । पार्टी राजनितीमा थोरै असन्टुष्टी बोकी रहेकी लामाको कफि सपमा आज काग्रेस नेता सिंह पुगे ।
लौह पुरूष गणेशमान सिंहका छोरा एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रकाशमानले नबिना फरक पार्टीको युवा नेतृ भए पनि उनले सञ्चालन गरेको रिमठिम रेस्टुरेन्ट एण्ड कफी शपमा पुगेर व्यवसायिक सफलताको शुभकामना दिएका हुन्। प्रकाशमानलाई नबिनाले स्वागत गरेकी थिइन्।
सिंहका प्रेस सहयोगी युपी लामिछानेका अनुसार राजनीतिमा जस्तै व्यवसायमा पनि सफल हुन नबिनालाई शुभकामना दिएका थिए।
नबिनाले युवाहरुसँग मिलेर मीनभवनस्थित संसद भवन अगाडि रिमठिम रेस्टुरेन्ट एण्ड कफी शप सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। यो रेस्टुरेन्ट पछिल्लो समय राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको थलो बनेको छ।